Endesa padanho rekumuka mahara | Ehupfumi Zvemari
Endesa padanho rekumuka mahara
Imwe yenyaya nyowani nyowani yatiri kuunzwa muna Zvita ndeyekuti kambani yemagetsi Endesa yave kuda kusvika pamwero wekusununguka. Iyo ndeimwe yemafambiro akanakisa emafambiro ezvivimbiso akanyorwa pamisika yemari. Zvese izvi, mumwedzi izvo zviri kusanyanyisa kufarira zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Nechikamu chakanaka chehunhu hwenyika index index munzvimbo dzisina kunaka, kunyangwe mune mamwe maitiro ane kuderera kwemadhigirii maviri. Pasina iyo iyo nguva kune nhau dzeiyo yakamirirwa kwenguva refu Krisimasi pati rally izvo zvisati zvaonekwa.
Nechirevo umo musika wekuSpain wemusika uri kukuvara zvakanyanya nekurasikirwa gore rino nekungodarika 13%. Ndichiri pane zvinopesana, Endesa akaonga munguva ino mu zvinopfuura 10%. Musiyano wakasiyana-siyana wakaonekwa nevakawanda vashoma uye vepakati varimi. Naiyo, kumanikidzwa kwekutenga kuri kuiswa pachena kumutengesi. Tiine tarisiro yekuti kuwedzera kwacho kunogona kuunganidza kusvika kupera kwegore. Ichi ndicho chokwadi panguva ino chaiyo uye kumirira mazuva ekupedzisira mumisika yemari.
Chimwe chinhu chinofanirwa kutarisirwa kubva izvozvi ndechekuti vagovani veEndesa vanogashira musi waNdira 2, 2019 mubairo une purofiti iri padyo ne7%. Izvi zvinotsanangura kuti nei paine mashoma kwazvo kutengesa mukambani yemagetsi iri yeItaly Enel. Izvi zvinogona kuva chiratidzo chine simba chekuti nzvimbo dzekutenga dzichakwanisa kuenderera mukati memazuva ekupedzisira egore iri ave kuda kupera. Kunyangwe parizvino, iwo maonero ari pachena akanaka kune izvo zvido zvevadiki nevapakati varimi vakatora zvinzvimbo mukambani yakanyorwa.
1 Endesa padyo padyo ne21 euros
2 MS inodzokorora kukosha kwayo kumusoro
3 Kutanga-kwe-imwe mibairo
4 Nguva yakanaka yemagetsi
5 Kugamuchirwa kwakanaka kune kuderedzwa
Endesa padyo padyo ne21 euros
Parizvino migove yekambani yemagetsi yeSpanish yave pedyo ne21 euros pagove uye zvakajeka pasi pemaitiro bullish pane ese nguva: ipfupi, iri pakati nepakati. Kana danho rako rekurwisa kuti upinde muuptrend riri pa20,90 euros. Mune mamwe mazwi, zviri kuda kuzadzisa ichi chinangwa uye izvo zvinogona kuitika chero nguva zvichibva pakushanduka kwemutengo weEndesa. Iyo nhanho iyo saka vese varairidzi vakamirira zvakanyanya nechinangwa chekuumba chikamu chechikamu ichi chekugovana.
Izvo hazvigone kukanganikwa kuti yakakosha yemahara yekusimuka nhamba zvinoreva izvo zvatova hapana zvinopesana pamberi. Izvi mukuita zvinoreva kuti iwe unogona kuenda kusvika paunoda sezvo pasina miganho pane kufamba uku mumisika yemari. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Chero zvazvingaitika, ichave iri danho rakakosha kwazvo rekupinda kwevagovani vatsva muukoshi uhwu hwakabatanidzwa mune yakasarudzika indekisi yemusika weSpanish, Ibex 35.
MS inodzokorora kukosha kwayo kumusoro
Imwe yenyaya dzakakodzera svondo rino ndeye iyo inoreva Morgan Stanley kukwidza mutengo weEndesa. Kusvika padanho rekuti vaisa mutengo wekutarisirwa mu 21 euros pamugove kubva parizvino ma20,2 euros. Izvi zvinoreva kuti inogona kuongororwa zvekare padyo ne3,5% kubva pamitengo yazvino. Imwe nhau yakanaka kune vashoma uye vepakati varimari avo parizvino vakaiswa mari muukoshi. Hazvishamisi kuti, vane tariro huru yekuti inogona kuve neimwe yakanaka yekukwevera kumusoro.
Kune rimwe divi, mutengo unopihwa naMorgan Stanley uri padyo chaizvo neuyo wekubvumirana kwevanoongorora, vanoisa kukosha kwayo pa21,03 euros, ine mukana we 3,65% uye kurudziro yekuchengeta. Mupfungwa iyi, hatigone kukanganwa kuti Endesa, zvinoenderana neazvino makota mhedzisiro, yakawana padhuze nemamiriyoni gumi nemazana emamiriyoni emamiriyoni mumwedzi mipfumbamwe yekutanga yegore rino. Ndokunge, nekuwedzera kwe1.200% kupfuura pakati paNdira naSeptember wegore rapfuura. Kunyanya, yakatorwa kubva mukuita kwemusika wakasununguka.
Nezve imwe nyaya yezvisinei nekufarira senge kugoverwa kwezvikamu pakati pevachagovana veiyi inokosha magetsi kambani. Kwamunozogovera mubairo pedyo ne7%, sezvatakambotaura pakutanga muchinyorwa chino. Zvakanaka, izvi zvinodzivisa zvinobuda kunze zvekukosha kweIbex 35. Kana mutengo waro wave pachikumbaridzo chemakumi maviri nemaviri euros pamugove. Uyu mubhadharo kune wekugovana unozoshanda musi waNdira 21, kana uchizoenda kuaccount account yevatengesi.
Izvi mukuita zvinoreva kuti ichadzikiswa kubva pamutengo wako wekuverenga. Zvisinei, zvinowanzoitika kuti mushure memasangano mashoma ekutengesa dzosera chikamu chekutanga chemutengo saka musimboti chiitiko chinobatsira kwazvo kune vashoma uye vepakati varimi. Iko kwavanogona kugadzira portfolio yemari yakatarwa mukati meiyo kusiana. Nemubhadharo wakatarwa uye wakavimbiswa gore rega rega chero chii chinoitika mumisika yemari. Seimwe yeakakosha akawedzera maitiro echiito.
Nguva yakanaka yemagetsi
Chero zvazvingaitika, kuita kwakanaka kwaEndesa pamusika wemasheya kunoenderana nenguva yakanakisa iyo makambani emagetsi ari kuenda munyika medu. Vanenge vese ivo vanotanga kubva kune yakafanana mamiriro sezvo ivo vari mumamiriro, kana zvirinani padyo padyo nekuzviita, zvemahara kusimuka. Semuyenzaniso, Iberdrola, Enagás kana Red Eléctrica Española uye izvi zvakare zvinovabatsira kuti vadzikiswe kubva zvino zvichienda mberi. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe kunyangwe kubva kwakakosha kwemaonero.
Mukati meichi chiitiko chakajairika, hazvishamise kuti migove yeEndesa ine yakakwira kumusoro nzira pamusoro pemavhiki anotevera kana kunyange mwedzi. Naizvozvo, ichave iri imwe yehunhu hwezvibodzwa zveSpanish izvo zvichafanirwa kuve tarisa zvakanyanya mumazuva ano. Uye zvakare, iwe haugone kukanganwa kuti inoshanda senzvimbo yakachengeteka munguva dzakaomesesa dzemisika yemari. Mugore izvo hazvo hazvina kunge zvakanaka kwazvo kuchikwata chenyika uye kuti zvichave zvirinani kukanganwa mhedzisiro yake yakaipa kumberi.
Kugamuchirwa kwakanaka kune kuderedzwa
Kune rimwe divi, vatengesi vakagamuchira nhau kuti Endesa ichaderedza zvikamu zvaro kubva muna 2021 ichagovera makumi masere kubva muzana yemubereko wayo kune uyu mubhadharo uye izvo zvakanzwisiswa nemisika yemari sechishuwo chekambani kuwedzera kuvepo kwayo mubazi mumakore anotevera. Izvi zvinofanirwa kuturikira mukukosheswa kwekukosha kwayo pamusika wemasheya. Kunyangwe, hongu, kukoshesa kwakanyanya hakutarisirwe mushure megore rakanaka rave riine gore rino rave kuda kupera.
Izvo zvinodawo kuongorora kuti ikambani yakanyorwa ine kugadzikana kukuru mukuenderana kwemitengo yayo. Sezvinei, hairatidzi kusagadzikana kwakanyanya uye hapana musiyano wakakura pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi muchikamu chimwe chete chekutengesa. Ichi ndicho chinhu chinokosheswa zvakanyanya neakanyanya-akatsanangurwa maficha chimiro. Iko kuchengetedzeka kunokunda pamusoro pebhenefiti iwe yaunogona kuwana mumisika yemari. Inotarisirwa kune vanodzivirira kana kuchengetedza saver mumisika uye nepakati nepakati.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kujekeswa kuti panguva ino kutora chinzvimbo mune chekuchengetedza kunogadzira zvimwe zvakanaka kupfuura zvakaipa mhedzisiro. Chaizvoizvo nekuda kwekupinda munzira yekukosha kwakadai sekuregedza mahara. Iko kune zvimwe izvo zvinogona kuwanikwa pane zvakarasika uye izvi zvinozivikanwa nevamwe vashoma uye vepakati varimari vari kusarudza kuisa iyo kukosha. Mune zvimwe zviitiko, kuburikidza neane hukasha mashandiro ekuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire kubva panguva chaidzo idzi. Kupfuura izvo zvinogona kugadzirwa akateedzana ekugadzirisa kubva zvino zvichienda mberi. Chinhu icho kune rimwe divi chakajairika uye kune imwe nhanho inonzwisisika uye ine hutano kune yakazotevera shanduko mumisika yemari.
Chero zvazvingaitika, chokwadi chinoratidza kuti Endesa ndechimwe chekuchengetedzwa kwenyika yehunyanzvi ine yakanakisa hunyanzvi parizvino. Uine mukana mukuru wekutenga pane kubata, zvirinani munguva pfupi. Kunyangwe isina kunangana nekutengesa mashandiro nekuda kweakasarudzika maitiro ayo aya emagetsi kukosha. Ari pane runyorwa rwevamiriri vazhinji vezvemari, kunyanya mushure meiyi zhizha rapfuura. Iko mamiriro avo akasiyana zvakanyanya uye humbowo hwakanaka hweichi ndiko kugadzirisa kwakaitwa naMorgan Stanley. Kusimudza mutengo wayo, chimwe chinhu chakaita kukosha kwazvo muzvikamu zvevhiki izvi. Chinhu icho kune rimwe divi chakajairika uye kune imwe nhanho zvine musoro uye zvine hutano kune ayo anotevera shanduko mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Endesa padanho rekumuka mahara
Chii chingaitwe muvhiki rekupedzisira pamusika wemusika?
Ndezvipi yambiro yedzidzo?